Takelaka Tsara Soratra 003 : Ny fitiavana raha tantaraina, ny fitiavana raha ventsoina – Blaogin'i Voniary
Ambetin-dresaka ny FITIAVANA tamin’ity Takelaka Tsara Soratra indray mitoraka ity. Efa hatramin’ny fahagolan-tany tokoa no nampikorina ranomainty ny fitiavana ary tsy ambakan’izany ireo nanolotra ny asa sorany hoankafizin’ny mpamaky ato amin’ity revio ity. « Tsy tantara ny tantara raha tsy ilafihan’ny fitiavana » hoy E.D. Andriamalala andrarezin’ny tantara foronina Malagasy, izay vao feno 100 taona tamin’ny 22 Oktobra 2018, hany ka ahitana taratra ny FITIAVANA avokoa ny ankamaroan’ireo boky nosoratany toy ny « Zazavavindrano », ny « Antso », ny « Fofombadiko », ny « Menarana », ny « Hetraketraka », « Ilay vohitry ny nofy » sy ny hafa.
Ao anatin’io tontolo io, mifamaofao eny ihany ny toky sy ny fitaka, ny tiako sy ny halako ary ny mangidy sy ny mamy ka izay angaha no mampisonga ny aingam-panahin’ny maro manoloana azy. Izany indrindra no ventsoin’i Riva ao anatin’ilay « Hasambarana halako » ary tantarain’i Ony Lantoarimamy Ravorombato ao amin’ny « Hazakazaky ny fo ». Fa rehefa iny mihoatra ny loha iny ny sangy ifanaovana dia tonga amin’ny fifandaozana miantraika aman’aina ka mahatonga an’i Lisimpaty « misafidy ho tokana » sy i Kalamossa ho « Leo Saona ». Sakaiza tsy foin’ny fahadisoam-panantenana, ny fijaliana ary ny sento sy tomany koa ny fitiavana, indrindra rehefa hafakely toy ny tantarain’i Rija Al-Jonah ao amin’ny « Izaho sy Ianao » sy ny « Antso diso » an’i F-X Mahah. Rehefa ny fo adala anefa no maka ny toeran’ny saina hendry, toa lasa manao ny tsy fanao, mahavita ny tsy ampoizina toy ilay tovolahy nitory fitiavana tamin’i Masera ao amin’ny « Tia anao Jesoa » an’i Mina. Dia izay fotsiny ve no atao hoe fitiavana ? Hery mandresy ny ratsy rehetra sy mamporisika hiova koa io fitiavana io raha ilay sombin-tantara « Joka » an’i Hanitr’Ony no zohina. Jiolahy rain-dahiny no resim-pitiavana ka niteraka fiovana goavana teo amin’ny fiainany sy teo amin’ny fiainam-pirenena. Eny e ! Aleo hajanoko eo fa aoka ianao no hamadika ny pejy sy hianoka ireo tsetsatsetsam-pitiavana isan-karazany ao amin’ity Takelaka Tsara Soratra mamintsika ity.
Tsy hoe natao an-jorom-bala akory, farehefa vita izay ny ankapobeny dia misy ireo pitsopitsony. Anisan’ny tara-kevitra mivohitra ao ihany koa ny fahantrana sy ny adim-piainana mianjady amin’ny maroanisa. Na eo aza anefa izany, maha-izy azy ny firenena iray ny kolontsainy ka miezaka mampatsiaro izany ireo mpanoratra. Ny kabary, izay vakoka mampiavaka antsika Malagasy no velabelarin’i Tsiloko Mahadigny amin’ilay lahatsoratra « ny serasera am-bava » ary ny « tanora mikabary » kosa no vahavahan’i Ny Rovako Randriamanalina.
Amin’ny maha Takelaka Tsara Soratra ny Takelaka Tsara Soratra dia « lahatsoratra voakaly » nandalo fantina sy sivana no mandravaka ny pejy tsirairay ka mampirehareha an’i Soanampoinimialy sy Avelo Nidor hoe « Efa Tsara Soratra ». Mifanindran-dàlana ao ny lahatsoratra mafonja misy hafatra horaisina, ny tantara mahasarika misy lesona azo tsoahina ary ny tononkalo mirindra misy feo miangola. Samy manana ny hanitry ny kanto izay mampiavaka azy ny mpanoratra sy ny poeta tsirairay. Haren-tsaina mandranin-tsaina, rahateo ny boky hoy i Riambola Mitia ao amin’ny teny fanolorana ka ireo laro samihafa ireo no mahatonga ny asa soratra iray hanitikitika fanahy sy hanaitaitra ny saina ka ho mateza vakina.
Raha ny ahy manokana, ireto no nironan’ny saiko tamin’ity Tsara Soratra 003 ity.
Mi-fa-ndri-a-ka – Benoit Rakotovao : Mahaliana ny fomba itarihan’ny mpanoratra ny resaka tsikelikely. Hampahafantatra fomba Malagasy iray ny no tanjona fa nohaingoiny tantaran-tovolahy mpianatra roa tia misangisangy ka maha-te-hamaky hatrany. Sombin-tantara tsotra raha zohina, misosa ny maso mitety ny andalana saingy misy lesona sy soatoavina azo tsoahina dia ny fifankatiavana, ny firaisankina sy ny fihavanana.
Va – Na Rajaonisoa : Tononkalom-pitiavana lokoin’ny filalaovana feo sy tamberim-peo izay hamafisin’ny teny verin-droa ka mampisamboaravoara ny fo sy mampiholokolika ny saina. Toa tsapanao avy hatrany ilay fihetseham-po mampivezivezy eran’ny trano, mampitabataba sy mampibitabitaka.
Volaña aminazy zanako – Doloïer : Amin’ny fiteny Betsimisaraka no anehoan’ity poeta ny hafatry ny reny amin-janany lahy ka mahasondriana ery satria miala amin’ny mahazatra. Manan-karena tokoa ny tenindrazantsika ary vonton-talenta ny tanindrazantsika.
Joka – Hanitr’Ony : Avo hatrany ny lenta, hainteny, ohabolana sy voambolana tsy sakaizan’ny vava no entin’ny mpanoratra mandravaka ity sombin-tantara ity. Ny fizotry ny tantara koa, mampitaintaina tsy mampitombona, karazan’ireny mampanontany tena ireny foana hoe : « Inona ary no hitranga ? ».
Tsy fifantenan’ny mpitsara akory fa safidin’ny mpamaky. Tsy fitsaran’ny mpahay literatiora fa hevitry ny mpankafy kanto fotsiny. Ho inona moa ny mpanoratra raha tsy misy ny mpamaky ary ho aiza ny mpankafy raha tsy eo ny mpanakanto. Koa, AZA MIJANONA MANORATRA, AZA MITSAHATRA MAMAKY.
ED Andriamalala, mpanoratra malagasy, soatoavina malagasy, sombin-tantara, takelaka tsara soratra, takelaka tsara soratra 003, tononkalo malagasy, vanimpotoana ankehitriny
2 commentaires sur “Takelaka Tsara Soratra 003 : Ny fitiavana raha tantaraina, ny fitiavana raha ventsoina”
29 janvier 2019 à 17 h 51 min
Ity misy boky malagasy azon’ny rehetra hadika sy haparitaka maimaim-poana.
31 janvier 2019 à 5 h 16 min
Mankasitraka indrindra amin’ny fizarana e!